पुष ८, २०७७ सन्ध्या पौडेल
१) निर्वाचनको समयमा गरिएको प्रतिवद्धता कतिको पूरा हुदैछ ?
चुनाव जितिसकेपछि चुनावताका गरेका प्रतिबद्धता अनुसार घोषणा पत्रमा भएका मध्ये हामीले ९० प्रतिशत कामहरु गर्न सफल भएका छौ । केही कामहरु बाँकी पनि छन् । भएका कामहरुमा पर्सा जिल्लामा तेस्रो नम्बरमा खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा ग¥यौ । विद्यालयको अवस्था धेरै नै सुधार गरेका छौ । भौतिक संरचना अन्र्तगत डेक्स बेन्चको मर्मत, विद्यालय भवनको मर्मत, गरेका छौ । गाउँपालिका स्तरबाट १८ जना शिक्षकको दरबन्दी खुल्ला गरी शिक्षाको स्तरलाई माथि उकास्नमा प्रयत्नरत छौ । त्यसको लागि हामीसंग समय पनि छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा पहिला औषधीको आपूर्ति थिएन । अहिले त्यसको पूर्ति गरिरहेका छौ । कोरोनाको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा हाम्रो नेपाल भरीको जति स्थानीय सरकारहरु छन् । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि हाम्रो गाउँपालिका स्तरका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु लगायत सबै पदाधीकारीहरु जसरी खट्नु भएको छ मलाई लाग्छ उहाँहरु सबै धन्यवादका पात्रहरु हुनुहुन्छ । हामीले जति संघ सरकारबाट अपेक्षा गरेका थियौ त्यो अलि भएको छैन । विकासको कुरा गर्दा बाटो र नालाको व्यवस्थापन गरिसकेका छौ । सार्वजनिक भवनहरुको मर्मत संम्भार गरेका छौ । जे होस् समग्रमा भन्नु पर्दा राम्रो विकास गरेका छौ र गर्ने तरखरमा पनि छौ ।
२) काम गर्न सहज वा अप्ठ्यारो के छ ?
काम गर्न सजिलो छैन । पहिलादेखि बिग्रेको ठाउँ छ । हाम्रो यो तराई वा अन्य क्षेत्रको कुरा गर्दा विकासको नाउँमा केही भएकै छैन । बजेट र पचाउने काम हुन्थ्यो । तर अहिले स्थानीय सरकार बनि सकेपछि यहाँ आएको बजेट हमीले सार्वजनिक सुनुवाई गरी विकासे योजना बनाएका छौ । विकासेकाममा पनि जनतालाई नै सहभागी गराएका छौ । उनीहरुले नै त्यसको मूल्याकंन गरेका छन् । यसरी भन्नु पर्दा हामीले राम्रो काम गरेका छौ । र राम्रो काम गर्दा जहाँ पनि चुनौति छ, कठिन छ । कठिन यात्रामा छौ ।
३) आगामी योजनाहरु के छन् ?
पकाहामैनपुर गाउँपालिकालाई खोपमुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्न गईरहेका छौ । अर्को भनेको वाईफाई फ्रि पालिकाको रुपमा स्थापित गरेक थियौ । तर पछिल्लो समय प्राविधिक गडबडीका कारण त्यसले निरन्तरता पाउँन सकेको छैन । तर यस वर्षदेखि फेरि हामीले वाईफाई फ्रि गर्छौ । सबैभन्दा ठूलो योजना भनेको कृषि कान्तिका लागि हरेक खेतखेतमा कृषि पोलहरु गाडेर त्यसमा विद्युतीय तार जडान गरि कृषि मिटर राखी २ बिगाहा सिचाईका लागि ४ देखि ५ हजार रुपैयाँ सम्म खर्च हुन्छ । त्यो रकमलाई मिनिमाईज गरी १ देखि १ सय पचास रुपैँयामा कृषि सिँचाई गर्ने योजना छ । यो कृषिको लागि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी हुने छ । यो कार्यक्रमको लागि ५५ देखि ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु । यसवर्ष त्यसको टेन्डर हुन्छ । त्यसै अनुसार पोलिङ्ग, कृषि विद्युतीकरण लगायतका काम गरी बोरिङ्ग राखेर कृषकका खेतखेतमा सस्तो सुलभ सिँचाई पु¥याउने काम गर्ने योजनामा अगाडी बद्दै छौं ।
४) संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको समन्वय कस्तो छ ?
सबैसंग राम्रो सम्बन्ध छ । व्यक्तिगत सम्बध राम्रो नै हुन्छ । म सबैसंग मिठै कुरा गर्छु र सरकारको सम्बन्धको कुरासंग विकास जोडिएर आउँछ । विजय चौरसीयाले कति विकास ग¥यो, मुख्य मन्त्रीले कति विकास गर्नु भयो ? प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा कति विकास भयो ? भन्ने प्रश्न जोडिएर आउँछ । यो हिसाबले भन्ने हो भने अहिले सम्म संघ सरकारबाट कुनै पनि किसिमको केही गरौं भन्ने सकारात्मक योजनाहरु आएन । अहिलेको प्राथमिकता भनेको कोरोना व्यवस्थापन नै हो । कोरोना परीक्षण विरामी र औषधीको व्यवस्थापन कै कुरामा सरकारले कहीले शुल्क लिने र कहीले निशुल्क भन्ने कुराले हामी अन्यौलमा छौ । संघ सरकारकै नीति अन्यौलतापूर्ण छ भने उसैको निर्देशनमा चल्ने हाम्रो अवस्था के होला ? तर प्रदेश सरकारले कोरोनाको व्यवस्थापनको हकमा रकम निकासा गर्ने, पिपिई र पिसिआर परीक्षण मेसिन, औषधीको व्यवस्था, आईसोलेसन र क्वारेन्टाइनको अनुगमन लगायतका कार्यहरु भइरहेका छन् ।
५) अन्तयमा के भन्न चाहनु हुन्छ ?
कोरोनाको महामारी सकिएको छैन । फेरि फर्किदै छ जस्तो लाग्दैछ । यसले राजधानीलाई घेरिसकेको छ । म गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश नंं २ को अध्यक्ष र गाउँपालिकाको अध्यक्षको नाताले स्वास्थ्य नै धन हो । ज्यान नै नरहे केही रहदैन । त्यसैले कोरोनाबाट सर्तक रहौँ । आफू बाचौं र अरुलाई पनि बचाऔं भन्न चाहन्छु ।
कार्तिक ७, २०७७ सन्ध्या पौडेल
आश्विन ३०, २०७७ सन्ध्या पौडेल